China yakasununguka radzika vinyl flooring Mugadziri uye mutengesi | Karlter
Garandi Anopfuura makore matanhatu
Kubatsira Isina mvura
Surface Kurapa UV kupfeka
Chigadzirwa Chigadzirwa Akasununguka akaisa Vinyl Plank
Pamusoro kudzika nekusimbisa / ruoko rwakabviswa
Kuiswa Akasununguka akarara
Pfeka rukoko 0.3 / 0.5 mm
Saizi 9 "x48"
Zvitupa CE / SGS
Kurongedza Katoni + nhovo
Ko Loose Lay ingashandiswa kupi?
Kicheni, imba yekugezera, imba yekutandarira, yekurovedza muviri, horo, yekurara, yekudzidza uye yepasi
Yakasununguka Rara Inoisa nyore nyore pamusoro pemafurati, akatsetseka, akaoma uye guruva mahara subfloors. Akasununguka akarara pasi pevinyl akavandudza kudzikisa nguva yekumisikidza uye kubvumidza mukana kune zvepasi pekushandisa. Pasi pemamiriro ezvinhu akakodzera aya mataira anogona kuiswa pane subfloor pasina chero chinamatira. Izvi zvinobatsira kuti dzive nyore kuisa sarudzo kune chero munhu uye wese.
Zvizhinji Nezve Yakasununguka Lay
Akasununguka Lay Vinyl Mapuranga ane makobvu evinyl matenderedzwa nerabha inotsigirwa iyo yakagadzika pane yakatetepa pamusoro.
Chii chinoita kuti Loose Lay Vinyl Planks asiyane nezvimwe zvigadzirwa ndeyekuti haidi zvinonamatira, zvekunamatira, kana rurimi uye nzira dzekubata mapuranga munzvimbo. Mapuranga matete e vinyl akagadzika akamira panzvimbo pasi uye anoramba aripo kamwe akaiswa.
Mhando iyi yeVinyl yekudyara inogona kuiswa pamusoro peiripo huripo zvakapusa uye nekukurumidza.
Iyo Kuisirwa Maitiro eLosipo Lay Vinyl Plank
Iwo musana weLoose Lay Vinyl Mapuranga anoshandisa kukwesana kuti abate subfloor pasi payo. Iyo subfloor inoda kugadzirirwa uye inofanira kunge yakaoma, yakatetepa, nhanho, yakachena, uye isina guruva. Installers inongoda kumisikidza iyo Yakasununguka Lay Vinyl Flooring munzvimbo uye ive shuwa kuti kune kukakavara kwakaringana pakati peimwe yeapuranga uye madziro.
Kucheka mapuranga kuona kuti zvidimbu zvekupedzisira zvakaringana zvinoda kuitwa. Zvisinei, hapana ruzivo rwakakosha runodikanwa kuti udaro.
Iyo Bhenefiti Yeakasununguka Lay Vinyl Mapuranga
Yakasununguka Lay Vinyl Flooring yave kuita sarudzo inozivikanwa nekuda kwenhamba inokwezva yemabhenefiti yainopa.
Sezvambotaurwa, urwu rudzi rwepuriri ruri nyore kuisa. Iko hakuna kudikanwa kweglue, zvekudya, kana yekudzvanya-yekuvharira system. Installers vanongoisa mapuranga munzvimbo. Nekuda kwekureruka kwekumisikidza, hazvitore nguva yakawandisa kupedzisa basa uye zvakajairika kubhadhara zvishoma semhedzisiro.
Chimwe chiitiko cheiyi mhinduro yepasi ndechekuti inotakurika. Inogona kubviswa uye kuiswazve mune imwe nzvimbo zviri nyore. Mazhinji mamwe mhinduro pasi haape iyi bhenefiti.
Kuva nesarudzo iyi kunoreva kuti iwe unogona kufambisa aya mapuranga kuenda kumakamuri akasiyana kana kutora pasi rino newe kana uchifambisa dzimba, uchigadzira akati wandei dhizaini yemukati uye zvingakuchengetedze mari nekufamba kwenguva.
Pashure: namatira pasi vinyl pasi